Josefa naFarao; Nhaka yaTimoti | Waizviziva Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Mam Maya Mongolian Myanmar Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nei Josefa akagera ndebvu asati aona Farao?
Mufananidzo wekuIjipiti uri pamadziro uri kuratidza munhu anogera achiita basa rake
Maererano nezvinotaurwa muna Genesisi, Farao akashevedza musungwa aiva muHebheru, Josefa, kuti akurumidze kuuya pamberi pake kuzodudzira hope dzakanga dzichitambudza Farao. Josefa akanga atova nemakore akati kuti ari mujeri. Pasinei nekuti ainge achidiwa nekukurumidza, Josefa akatanga agera ndebvu. (Genesisi 39:20-23; 41:1, 14) Kunyange zvazvo mashoko iwaya achiita seasingakoshi, anoratidza kuti munyori wacho aiziva tsika dzevaIjipiti.
Vanhu vemarudzi akawanda ekare kusanganisira vaHebheru, vaiwanzochengeta ndebvu. Asi “pamarudzi ose ekumabvazuva, rudzi rwevaIjipiti chete ndirwo rwakanga rwusingachengeti ndebvu,” inodaro Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature yakanyorwa naMcClintock naStrong.
Ndebvu ndidzo chete dzaifanira kugerwa here? Magazini inonzi Biblical Archaeology Review inopa pfungwa yekuti dzimwe tsika dzekuIjipiti dzaitoda kuti kana munhu achida kuuya pamberi paFarao aifanira kugadzirira sezvaaizoita achida kupinda mutemberi. Kana zvainge zvakadaro, Josefa aizofanira kugera bvudzi rose remusoro wake neremuviri wake.
Nyaya iri mubhuku raMabasa inoti baba vaTimoti vaiva muGiriki. Zvinoreva here kuti vaibva kuGirisi?
Hatingadaro hedu. Mutsamba dzaakanyora achifemerwa naMwari, muapostora Pauro dzimwe nguva aitaura nezvevaJudha nevaGiriki. Zvinoita sokuti paaiti vaGiriki, aireva vanhu vose vainge vasiri vaJudha. (VaRoma 1:16; 10:12) Hapana mubvunzo kuti chimwe chaiita kuti zvidaro kwaiva kushandiswa zvikuru kwaiitwa mutauro wechiGiriki netsika dzechiGiriki kunzvimbo dzaiparidzwa naPauro.
Vanhu vekare vaiti muGiriki munhu akaita sei? Kumakore anobvira muna 400 B.C.E. kusvika muna 301 B.C.E., imwe nyanzvi yekutaura yekuAtene yainzi Isocrates, yakataura ichirumbidza kupararira kwaiita tsika dzechiGiriki munyika yose. Izvi zvakaita kuti azoti, “vanhu ava vanonzi vaGiriki kwete nechikonzero chekuti zvizvarwa zvekuGirisi asi nekuti vanotevedzera zvatakavadzidzisa.” Kunyange zvazvo tisinganyatsoziva zvedu, zvingangodaro kuti baba vaTimoti avo vakanga vasiri muJudha, pamwe chete nevamwe vainzi naPauro vaiva vaGiriki, vakanga vari vaGiriki nenyaya yekuti vaitevedzera tsika dzevaGiriki kwete nekuti vakanga vari zvizvarwa zvekuGirisi.—Mabasa 16:1.
“Ndapota, Teererai Hope Idzi”
Matambudziko aiva mumhuri yaJosefa anopa chidzidzo chinokosha kune vari mumhuri dzekurera.
Chii chakabatsira Timoti uyo ainyara paaiva muduku kuti azova mutariri wechiKristu anoshingaira?
Waizviziva Here?—November 2015
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Mwari Anoona Sei Hondo?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI Mwari Anoona Sei Hondo?
Mwari Anoona Sei Hondo?
NHARIREYOMURINDI Mwari Anoona Sei Hondo?
Waizviziva Here?—April 2019
Waizviziva Here?—February 2019